NEWS | MICEG
မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်း နှစ်ပတ်လည် အသင်းသားစုံညီ ညီလာခံ အကြိုဂုဏ်ပြု စာတမ်းဖတ်ပွဲအခမ်းအနား ဖိတ်ကြားခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်း၊ နှစ်ပတ်လည် အသင်းသားစုံညီ ညီလာခံအကြိုဂုဏ်ပြု အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ စာတမ်းဖတ်ပွဲအခမ်းအနားကို အောက်ပါ အစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါ၍ တက်ရောက်ပါရန် ဖိတ်ကြားအပ်ပါ သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာ အသင်း နှစ်ပတ်လည် အသင်းသားစုံညီ ညီလာခံ ကျင်းပပြီးစီးခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာ အသင်း နှစ်ပတ်လည် အသင်းသားစုံညီ ညီလာခံ ကို 10.01.2014 ရက်တွင် အောင်မြင်စွာ ကျင်းပ ပြီးစီး ခဲ့ပါသည်။
Guidelines & Application Forms for AEA 2016
Application Forms for AEA 2016 Final Guidelines Renewable Energy Awards 2015 You want to know details, Contact Person […]
မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အတိုင်ပင်ခံအင်ဂျင်နီယာအဖွ့ဲ၏ နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေး ဖိတ်ကြားခြင်း
MICEG သင္းဖြ႔ဲစည္းမ်ဥ္း (မူၾကမ္း)
မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အတိုင်ပင်ခံအင်ဂျင်နီယာများအဖွဲ့နှင့် Myanmar Financial Center တို့ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသော Project Management Professional Course (MICEG & MFC batch-3, 2016) ဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ရန် စီစဉ်နေပြီဖြစ်ရာ သင်တန်းတက်ရောက်ရန် စိတ်ဝင်စားသူ အသင်းသားများ ဤအသင်းသို့ Email: [email protected] ပေးပို့ပြန်ကြားပေးပါရန် အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။
Project Management Professional ( PMP) Course ( MICEG – 1 /2016 )
မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အတိုင်ပင်ခံအင်ဂျင်နီယာများအဖွဲ့ (MICEG) နှင့် Myanmar Financial Center တို့ ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသော Project Management Professional ( PMP) Course ( MICEG – 1 /2016 ) ကို5/6/ 19 / 20 နှင့် 21 ရက်နေ့များတွင် သင်တန်းသားဦးရေ ၄၁ ဦးဖြင့် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ဖွင့်ပွဲတွင် MICEG ၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်မှူးကြီးသောင်းဝင်း ( ငြိမ်း)မှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပြီး MFC ၏ မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ ဒေါ်ပြည့်သီရိသော်ကလည်း အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ သင်တန်းသားများမှ ဆွေးနွေးတင်ပြချက်များပြုလုပ်၍ သင်တန်းကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ သင်တန်းတစ်လျှောက်တွင် MICEG […]
MICEG Annual General Meeting and Election
MICEG Annual General Meeting and Election MICEG Annual General Meeting and Election was held on 8.4.2017 at 9:00 AM at Myanmar Engineering Society. U Khin Maung Kyaw acted as chairperson of ceremony and Daw Kyi Kyi Pyone and Dr. Yin Yin Tun are masters of ceremony. U Aung Myint Chairman of MICEG, addressed the opening […]